काठमाडौं, २७ जेठ । वरिष्ठ न्युरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको शरीर रोगल गाल्दै लगेको छ। बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पतालको आइसियू कक्षमा उपचार गराइरहेका उनलाई कार्डियाक मोनिटर र अक्सिजन सपोर्ट दिइराखिएको छ। असाध्ये रोगले ...
काठमाडौं, २६ जेठ । उच्च हिमाली क्षेत्रको आरोहण यसै पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यसमाथि आरोहणमा जाँदा प्रयोग गरिने अक्सिजन गुणस्तरहीन भइदियो भने अवस्था कस्तो होला ? तर यहाँ भइरहेको छ यस्तै । ...
बढ्दै जनसंख्या, घट्दै सरकारी डाक्टर
काठमाडौं, २६ जेठ । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता दोहेर्याइरहँदा सरकारी सेवामा पाँच बर्षयता सबैभन्दा कम चिकित्सक कार्यरत रहेको पइएको छ । स्वास्थ मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दीमा नियुक्ति नगर्दा अघिल्ला बर्षका तुलनामा ...
बजारका तरकारीमा छ्यापछ्याप्ती विषादी
काठमाडौँ, २४ जेठ । बजारमा भित्रिने तरकारीमा छ्यापछ्याप्ती विषादीको प्रयोग हुने गरेको भेटिएको छ। बाली संरक्षण निर्देशनालयले सबै तरकारी र फलफूलमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म विषादीको मात्रा प्रयोग हुने गरेको बताएको छ। ...
नेपालीलाई बनाइयो विदेशी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला
काठमाडौं, २४ जेठ । विदेशमा उत्पादित नयाँ–नयाँ भ्याक्सिन र औषधिको प्रभावकारिता जाँच्न नेपालीलाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ । बर्सेनि हजारभन्दा बढी संघसंस्थाले नेपालीमाथि अनुसन्धान गर्दै आएकोमा केही औषधि, इन्जेक्सन, भ्याक्सिन र मेडिकल ...
भक्तपुरमा वीर अस्पताल निर्माण शुरु
भक्तपुर, २३ जेठ । सरकारले चाँगुनारायण नगरपालिकामा वीर अस्पताल बिस्तारका लागि रु ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चाँगुनारायण – ११ र १४ मा रहेको ५७० रोपनी सार्वजनिक जग्गामा वीर ...
काठमाडौंमा प्रत्येक महिना ब्रेनडेथबाट २० को मृत्यु
काठमाडौं, २० जेठ । ब्रेनडेथ भएका व्यक्तिका विभिन्न महत्वपूर्ण अंग अन्य व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । तर, दुर्भाग्य के छ भने ब्रेनडेथ भएका व्यक्तिको अंग प्रत्यारोपणमा जिम्मेवार स्वास्थ्य संस्थाहरू नै बाधक ...
तपाईंको पनि पेटको ‘पावर हाउस’ बिग्रिएको त छैन ?
काठमाडौं, १९ जेठ । पाको उमेरसम्म मदिरा सेवन गर्ने लतका कारण रामेछाप दोरम्बका लालबहादुर विक अहिले पछुतोमा छन्। वीर अस्पतालमा ल्याइएको अत्याधुनिक मेसिनमा शुक्रवार कलेजो परीक्षण गर्दा कडापन देखिएपछि उनको परिवार ...
राष्ट्रकवि घिमिरेको स्वास्थ्यमा सुधार, भोलि नेपाल ल्याइँदै
राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई भारतमा उपचारपछि शनिबार स्वदेश ल्याइँदैछ । नयाँदिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा उपचारका क्रममा स्वस्थ्य भएपछि उहाँलाई स्वदेश ल्याउन लागिएको उहाँकी छोरी उषा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । “भारतमा उपचारमा गराउँदा उहाँ ...
घरपिच्छे झाडापखालाका बिरामी !
काठमाडौँ, १४ जेठ । शान्तिनगर गाउँपालिकाका दुई वडाका घरपिच्छे झाडापखालाका बिरामी छन् । मुहानको दूषित पानीले शनिबारबाट फैलिएको प्रकोप आइतबार साँझसम्म नियन्त्रणमा आएको छैन । बिरामी संख्या बढदै गएपछि गाउँले आतंकित ...
काठमाडौं उपत्यकामा रगत अभाव !
काठमाडौँ, १४ जेठ । काठमाडौं उपत्यकामा रगत अभाव भएको छ । मागको तुलनामा अत्यन्तै न्युन परिमाणमा रगत संकलन हुँदा अत्यावश्यक बिरामीका लागि उपलब्ध गराउन कठिन भइरहेको नेपाल रेडक्रस रक्रसञ्चार केन्द्रले जनाएको ...